Global Voices teny Malagasy · admin – Jolay 2010
admin · Jolay, 2010
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Jolay, 2010
Bangladesh: ankizy iray ananganana indray ny sekoly
Bangladesh31 Jolay 2010
Ankizy iray dia ampy nitantarana ny fahasimban'ny trano fianarany nanoloana ny fakantsary : nandritra ny volana nanaraka izay, isaorana i Shawn Ahmed avy ao amin'ny Uncultered Project and Nerdfighters, izay nampiasa ny Youtube hanangonana vola ampy hananganana indray ity sekoly rava ity. Pidahouse ao amin'ny Signboard nalefan'i Shawn Ahmed nahazoana...
Kambodza: Fanokafana ofisialy ny vavahadin-tseraseran'ny zon'olombelona voalohany
Kambodza30 Jolay 2010
Sithi.org, varavaran-tserasera natao hanehoana ireo sehatra sy valina fanadihadihana mikasika ny tsy fanajana ny zon'olombelona any Kambodza no nosokafana amin'ny fomba ofisialy ny 22 jolay lasa teo, miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ireo andrim-panjakana maro toy ny ambasady, ny fikambanana maneran-tany sy ao an-toerana, fampahalalam-baovao ary ireo solontena isankarazany maneran-tany. Nandritra ny taona...
Filipina : olana rano ao Manille
Filipina24 Jolay 2010
Saripika avy amin'ny pejy Flickr an'i rickyli99 Miaina olana tsy fahampian'ny rano sedrain'ireo mpampiasa rano an-tapitrisany ankehitriny i Metro Manille, renivohitr'i Filipina. Tezitra amin'ny tsy fahitana rano handroana ny mponina ka namaky ny fantson-drano ao Malabon. Miezaka mampivoitra ity tsy fahampian-drano ity ireo mpitoraka bilaogy any Filipina. Miahiahy i Blackshama's blog mahita fa...
Pero : Mijery ny famaranana ny fiadiana tompondaka erantany avy ao Afar
Amerika Latina24 Jolay 2010
Nifarana ny alahady 11 jolay lasa teo ny famaranana ny fiadiana ny tompon-daka eran-tany amin'ny baolina kitra natao tany Afrika Atsimo. Volan'ny baolina kitra iny volana iny. Nijery ny fifaninanana tany Afar ireo mpitia baolina kitra peroviana. Ankehitriny dia miara-mifaly amin'ny Espanola ry zareo amin'ny mahatompondaka erantany vaovao azy. Teo amin'ny...
Niger : Misoko mangina ny hanoanana
Nizera14 Jolay 2010
Miteraka ahiahy be ihany ny tsy fahampian'ny fitateram-baovao momba ny olana ara-tsakafo any Sahel ho an'ny olona 2,5 tapitrisa any Niger izay voakasiky ny fahalanian'ny sakafo hohanina. Milaza hanamafy ny fandaharan'asany hiarovana ireo vahoaka ahiana ho tratran'izany ny PAM (Programme Alimentaire Mondial). Milaza ny fisian'ny krizy hafa ara-tsakafo ankoatra ny tamin'ny 2005...
Palestina10 Jolay 2010